स्वस्थानी व्रत कथा र तीर्थ यात्राको फर्सी – Hello Punarwas
एउटा गाउँका केही मानिसहरु तीर्थ जान तयार भए । उनीहरुले त्यस गाउँका मुखियालाई पनि तीर्थ जान आग्रह गरे तर मुखिया छोरीको बिहेको तयारीमा व्यस्त थिए, त्यसैले उनले एउटा फर्सी दिदै भने ‘म अहिले जान सक्दिन तर यो फर्सी साथै लिएर जानुहोस् र जहाँ–जहाँ तपाईहरु जानुहुन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ यसलाई पनि दर्शन गराउनु होला ।’ तीर्थ यात्रीहरुले केही नसोचीकन फर्सी झोलामा हाले र हिडे । उनीहरु जहाँ–जहाँ गए, फर्सीलाई पनि नुहाई दिएर भगवानको पाउमा ढोगाए । यसरी केही दिन पछि उनीहरु गाउँ फर्के र फर्सी मुखियालाई जिम्मा लगाए । भोलि पल्ट मुखियाकी छोरीको बिहे थियो । बिहे भोजमा त्यही फर्सीको तरकारी पकाइएको थियो । जब तीर्थयात्रीहरु खान बसे सबैले भने ‘ओहो ! यो फर्सी त कति नमीठो ।’ त्यसपछि मुखियाले भने ‘मेरो बारीमा फलेको फर्सी नमीठो परेछ । तीर्थयात्रा जाँदा मान्छेको पाप त काट्छ, यो फर्सीको स्वाद पनि तीर्थ गएर परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ तर यसको स्वाद त जस्ताको तस्तै छ त ।’ त्यो सुनेर तीर्थयात्रीहरु छक्क पर्दै मुखा मुख गर्न थाले । त्यसपछि मुखियाले भने हेर साथी हो, जब सम्म हामी आफूलाई परिवर्तनको मार्गमा हिडाउदैनौ, तब सम्म हामीबाट पाप भईरहन्छ । त्यसैले पाप तीर्थ यात्रा गएर, पूजाआज गरेर काटिदैन, आफूमा परिवर्तन गरी सत्मार्गमा हिंड्नाले मात्र पूण्य कमाईन्छ । त्यसैले वास्तविक पूजाआज र तीर्थ आफूमा परिवर्तन ल्याउनु हो ।
आजका महिलाहरुले आफुलाई क्रिम पाउडर र सुविधामूखी हुनमा मात्र सीमित नराखेर आत्मनिर्भर र स्वाभिमानको जिन्दगी रोज्न आवश्यक छ । त्यसका लागि हर भागदौडको परीक्षा र कठिनाइ पार गर्दै आफुलाई शिक्षित र मजुबत बनाउन जरुरी छ । जसले गर्दा कुनै पनि परिस्थितिमा कसैले पनि नारी अस्मिता र अस्तित्वमाथि गिद्धे आँखा लगाउने हिम्मत गर्न नसकोस् भन्ने पाठ स्वस्थानी व्रतकथाले प्रदान गर्न सकोस् ।
माथि उल्लेख गरिएको कथा नेपाली महिला र भर्खरै आरम्भ भएको श्री स्वस्थानी माताको व्रत तथा कथा वाचन सन्दर्भ झण्डै–झण्डै मिल्न जान्छ । सोमबारदेखि माघ महिनासम्म स्वस्थानी कथा बडो भक्ति र उत्साहकासाथ नेपालमा पढिन्छ । यसको महात्म्यको गुण गाइन्छ । सजधजकासाथ यसको व्रत हुन्छ । त्यस्तैगरी सांग्य विधि अपनाइन्छ । हामीले जिन्दगीभर यही कथा सुन्यौ । सुनायौं । हाम्रा जिजुबाजेदेखि नातानातिनासम्म पुस्तौं पुस्ता यो संस्कार हस्तान्तरण भइरह्यो । त्यो कथा मात्र हो कि यर्थाथता हो हामीलाई थाहा छैन । तर हाम्रो सुन्ने र रुने क्रम जारी नै छ । तर यसमा के सन्देश समाहित छ भन्नेकुरा साधारण जनमा बोध्य छैन । यिनका धार्मिक पक्षले मात्र महत्ता पाइआएको छ । कथा अनुसार सतीदेवीलाई झुक्याएर महादेवको हातमा पार्ने, जालन्धरको रुप लिएर विन्दाको अस्मिता लुट्ने विष्णु, इन्द्रको कुरा सुनेर गोमालाई जालझेलको राजनीति गरेर सराप दिने पछि आफै वृद्ध बनेर विवाह गर्ने, अन्तिममा गोमालाई गर्भवती बनाएर भाग्ने र किराँती रुप धारणा गरेर बसेकी पार्वतीलाई देखेपछि आफु विवाहिता भनेर बिर्सने शिवको प्रसंग स्वस्थानी व्रत कथाको प्रमुख कणिको रुपमा देखिन्छ । पुरुष प्रधानता र नारी रोदनलाई उजागर गरिएको एक कलात्मक अख्यानमा देखा परेका पात्रहरु अहिलेको समाजमा देखिने प्रतिनिधि पुरुष पात्र हुन् भनेर अहिलेको महिलाले बुझ्ने कि नबुझ्ने ?
आजका महिलाहरुले आफुलाई क्रिम पाउडर र सुविधामूखी हुनमा मात्र सीमित नराखेर आत्मनिर्भर र स्वाभिमानको जिन्दगी रोज्न आवश्यक छ । त्यसका लागि हर भागदौडको परीक्षा र कठिनाइ पार गर्दै आफुलाई शिक्षित र मजुबत बनाउन जरुरी छ । जसले गर्दा कुनै पनि परिस्थितिमा कसैले पनि नारी अस्मिता र अस्तित्वमाथि गिद्धे आँखा लगाउने हिम्मत गर्न नसकोस् भन्ने पाठ स्वस्थानी व्रतकथाले प्रदान गर्न सकोस् । कथा सुनेर भावविभोर हुने तर वास्तविक जीवनमा कथाको भन्दा मुटु चिर्ने घटनालाई किन खासै महत्व नदिने ? समाजमा हुने यस्ता जघन्य अपराध घट्नुको साटो किन बढ्दो छ त ? स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्न वा गराउनमा मात्र सीमित नरहेर यस्ता गहन विषयमा घोरिन आवश्यक छ । नत्र माथि उल्लेख गरिएको तीर्थ यात्राको फर्सी र स्वस्थानी व्रत कथा सवर्ण गर्नेको हविगत उस्ता उस्तै नहोला भन्न सकिदैन ।
कञ्चनपुरमा फेरी भारतीयको दादागिरी, बिना सहमतिमै भारतले गर्‍यो दशगजामा नाला खनेर डिल निर्माण
८ बैशाख २०७६, आईतवार १०:२२